एउटा भिजनको खाँचो छ | NepaleKhabar.com
एउटा भिजनको खाँचो छ
June 22, 2017 | 8:44 pm
योगीशकृष्ण / मध्य राततिर बलदेवको फोन आयो । अरुबेला र यसबेलाको फोनालाप अलि फरक खालको हुन्छ । फोन उठाउनासाथ उसले तत्काल आदेश फर्मायो “हे दाजु, एउटा अलि राम्रोखालको “भिजन” चाहिएको छ । सकभर चाँडो पठाइदेऊ । ”
बलदेवलाई पहलमानी गर्ने शोख छ । घरमा गाईभैँसी पालेको छ । खेतीपाती राम्रै गर्छ । बेला बेलामा भने यस्तै मध्य राततिर ताल न सुरको कुरा गर्ने गर्छ ।
मैले उसलाई भनेँ “ तिम्रो भिजन प्रष्ट छ । कुस्ती खेल । दूध घिउ खाऊ । खेती गर ।”
“हे हे हे ” उसले हाँस्दै भन्यो “ यो त व्यक्तिगत भिजन न भो । मलाई जनतावाला भिजनको खाँचो छ ।”
जब कुनै मानिसले जनता शब्दको प्रयोग गर्न थाल्छ मलाई डर लाग्छ –यो मानिस अब मानिस रहन्न । नेता हुने तयारीमा छ ।
मलाई बलदेवको माया लाग्यो, “तिमीलाई यस्तो खालको भिजन चाहियो किन ? ”
स्थानीय चुनावको मौसम छ । जसको मुखमा पनि भिजन भिजनै छ । केन्द्रका नेता होस् वा स्थानीय । भर्खरको कुरा हो , एउटा पार्टीको नेता थियो । टिकट नदिने भयो त अर्को पार्टीमा गयो । टिकट कनफरम भइसकेको छ । टिकट दिने कारण के हो त, भिजन हो रे । ऊ सँग भिजन छ । पुराना नेता कार्यकर्ता मुख बाएर हेरिरहेछ –हिजो आएको मानिसले टिकट पायो । पुरानाको भागमा ठनठन गोपाल ।हेर्नूस् त भिजनको कमाल ।”
मैले उसलाई सम्झाउने प्रयास गरेँ ,“यो केही होइन , अवसरवाद हो । अखबारको कुरा पत्याउने हो भने पैसाको पनि कुरा छ अरे ।”
ऊ हाँस्यो “ पाँच बरिसमा जहाँ करौँडोको खेला हुन्छ , त्यस ठाउँका लागि दश बीस लाख खर्च गर्नु कुन भारी बात हो । एक कठ्ठा खेत र दुईटा गाई म पनि दाउमा लगाउन तयार छु । गाउँ गाउँमा सिँहदरबार जो आउँदैछ ।”
स्थानीय निकाय शक्तिसम्पन्न भएपछि त्याहाँ छोटे सिँहदरबार बन्छन् । सुडान घोटाला नभए पनि नदी कटान घोटालाको प्रचुर संभावना बलदेवले देखेको रहेछ क्यार, त्यसैप्रति शायद ऊ इशारा गर्दै थियो ।
विस्तारै विस्तार ऊ खुल्न थाल्यो“ मेरो पनि इच्छा छ कि चुनाव लडूँ । मेरो जेठानको एउटा पार्टीमा जोर चल्छ । टिकटको जुगाड उसले मिलाइदिन्छ । उसको बैनीको घरपरिवारको कुरा हो । ”
“तिमी त कुनै अर्को पार्टीको समर्थक थियौ त । टिकट कसरी पाउँछौ ? ”
ऊ फेरि मजासँग हाँस्यो “तिमी त कुरा बुझ्दैनौ , दाजु । यो सिद्धान्तको कुरा हो । सब पार्टीको एउटै सिद्धान्त हो –चुनाव जित्नु , सत्तामा जानु । समोसा छ नि त्यसलाई कसैले चटनीसँग खान्छ , कसैले छोलासँग । कसैले त्यसमा प्याजको टुक्रा टाक्री , दही–सही हालेर चाट बनाउँछ । आलु टिकिया पनि सादा खाए चप हुन्छ त्यसमा मेकअप गरेपछि टिकिया चाट हुन्छ । यी सबमा मेन कुरा त आलु न हो । सबै पार्टी यस्तै हुन् । सब मेकअपको फेर हो । मैले टिकट पाउनु र टिकट खोज्नु सिद्धान्तको कुरा हो । दाजु , धेरै कुरा के गर्नु मलाई गतिलो फस्टकिलासको एउटा भिजनको जोगाड गरिदेऊ , जनतावाला भिजन । चुनाव प्रचार जो गर्नु छ । हाम्रो प्रदेशमा चुनावका लागि दुइ तीन महिना समय छ । यस बीच कुनै भिजन खोजेर पूरा गाउँ भिजाइ दिनु छ , त्यसपछि मेरो जीत पक्का हुन्छ । ”
“कस्तो भिजन भनूँ ? ”
उसले नै प्रस्ताव राख्यो “यो डुङ्गावाला भिजन कस्तो हुन्छ । पानी जहाजवाला भिजनमा त अर्कैको अधिकार छ । पारि बिहारमा बाँध बाँधेका कारण वर्सातमा गाउँमा डुङ्गा चलाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ । यसको भिजन बनाउँदा कसो होला ? रेलको भिजन एउटाको छ त त सम्मुनत नेपाल अर्काको छ । शहिदको सपना पूरा गर्ने भिजन पुरानो मोडल भइसक्यो । सुनेर सब हाँस्छ । घर घरमा दूधको लाइन कस्तो हु्न्छ , यसले कत्तिको काम गर्छ । कि वृद्धहरुका लागि घरघरमा अस्पताल ठीक हुन्छ । केटाहरु सब कोही अरब त मलेसिया पुगेका छन् । भोट दिने त बुढाबुढी न हुन् ।”
भिजन बजारमा पनि त पाउँदैन । पाउने भए गजबका विज्ञापनसहित बजार विकसित हुने थियो – मजबुत भिजन । पाँच वर्षको ग्यारेन्टी सहित । तरकारी बाहेक सबै विदेशी सामान पन पराउने नेपालीका लागि घरदैलो सेवा पनि उपलब्ध हुँदो हो – हे । भिजन लिनूस् भिजन । दिल्लीको भिजन ।युपीको भिजन । बिहारको भिजन त पाउन्न । उतै बडी डिमान्ड छ । दिल्लीको भिजन भुटान सिक्किम ब्राण्ड खूब चलेको छ । अहिले नयाँमा बलुचिस्तान ब्राण्ड आएको छ ।
युरेपियन युनियनले पनि उम्दा खालको भिजन उपलब्ध गराउँदा हुन् –भिजन विथ डिभाइन पावर । विथ क्रिश्चिनियन फ्लेवर आदि । अमेरिकन के कम हुँदा हुन् – भिजन वियतनाम । विजन अफगानिस्तान । भिजन इराक ।
बजारमा सहज तवरले भिजन उपलब्ध छैन । नभए बलदेललाई पठाइदिन हुन्थ्यो ।म अकमकाएँ ।
उसले शायद बुझ्यो “ रात धेरै भइसकेको छ । अब सुतिहाल । सुत्दा सुत्दै मेरो लागि भिजन खोजी देऊ” ।
उसले फोन राख्यो । म सुत्ने तरखरमा लागेँ ।